--Lọ - Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala m
Zụta ezigbo akwụkwọ na ntanetị
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala n'ịntanetị
Ezigbo / Paspọtụ Adịgboroja
Kaadị ID / adịgboroja
Tinye maka Visa VISA
Zụrụ ịbụ nwa amaala
Nọmba Nchedo Ọchịchị (SSN)
Aha Iwu / Adịgboroja Ala
Nkwupụta Ego Banyere
Certificlọ akwụkwọ Asambodo & Diplomas
Akwụkwọ ikike ịkwọ ụgbọ ala edebanyere na-enweghị nyocha
Tinye akwụkwọ maka ịnya ikike ịnya ụgbọ ala
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mba ụwa (IDP)
Express Express Driver's License Price
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nke oge
Emeohuru, Gbanwee ikike ịkwọ ụgbọala gị
Zụrụ Paspọtụ nke Abụọ
Nye Paspọtụ Diplọma
US Green Kaadị Online
Real Express Paspọtụ Online
Tinye maka Online Passport
Ihe niile ederede
Otu DL A, B, C
Etu ị ga - esi nye iwu na ntanetị
Zụta Ikike Ọkwọ Onlinentanetị na .ntanetị
Ebe ị ga-enye akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala n'ịntanetị na Europe Ị nọ na Germany, ma ọ bụ nke ọ bụla…
Zụta Ikikere Ntaneti N'ịntanetị
Zụrụ ikike obibi dị mma n'ịntanetị wee biri na Europe, America, Canada Na MDL, ị nwere ike…
Zụta Real Passport Online
Express paspọtụ Canada n'ịntanetị maka ọrịre Nweta ezigbo paspọtụ Canada mara mma nke nwere biometric…
Etu esi akwụ ụgwọ maka akwụkwọ
Kwụọ maka akwụkwọ site na Bitcoin Ị maara Bitcoin mara nke ọma? Ọ bụ crypto kacha ntụkwasị obi…
Zụrụ akwụkwọ ozi Real Express n'ịntanetị
Chọrọ akwụkwọ n'ịntanetị ma chọọ ya ngwa ngwa? Ọchịchọ ahụ kwesịrị ịkwụsị! Ebe a na MDL, anyị na-ewepụta akwụkwọ gị ma nke mbụ ma ọ bụ adịgboroja n'ime obere oge. Anyị bụ ndị kacha mma ka anyị na-enye ụzọ doro anya iji nweta akwụkwọ na-enweghị usoro na protocol ogologo. Kedu ihe ị na-eche?
Nye iwu paspọtụ edebanyere aha
Anyị na-emepụta paspọtụ maka mba 120. Isi ihe anyị lekwasịrị anya bụ na Europe, USA na Canada. Ị nwere ike lelee!
Chọgharịa paspọtụ anyị
Zụta ikike ịnya ụgbọ ala edebanyere aha database
Ebe a, ị nwere ike ịtụ ezigbo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na-enweghị ule ọ bụla. Mmepụta na-ewekarị ụbọchị ọrụ 3-5!
Chọgharịa akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala anyị
Ọrụ akwụkwọ anyị
Nye iwu ikike ịnya ụgbọ ala na-enweghị ule 2022
Ike agwụla gị n'ịme ule ịnya ụgbọ ala na ule mana enweghị ihe ịga nke ọma? Ị maara ka esi akwọ ụgbọala mana enweghị akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala? Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ịzụrụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala n'ịntanetị, nke a bụ ya. Anyị bụ otu ndị ọkachamara IT na-enweta gị ezigbo akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala n'ime naanị ụbọchị ọrụ 3-5. Ị nwere ike ịgbanwe akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala nke mba ofesi, megharịa akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ebe a. Anyị bụ ndị kacha mma. Kedu ihe ị na-eche? Order ugbu a
Zụta paspọtụ njem edebanyere aha
Ị bụ onye na-akwado njem? Na-achọ mgbapu? Naanị ihe ị ga - eme bụ ịzụta ezigbo paspọtụ n'ịntanetị ebe a. Anyị na-emepụta paspọtụ gị n'ime ụbọchị ọrụ 5-6. Edebara aha ya na ọdụ data gọọmentị. Ọ bụrụ na ịchọrọ paspọtụ adịgboroja, anyị ga-enwetara gị ya na ọnụ ala dị ala. A naghị edebanye akwụkwọ ikike paspọtụ adịgboroja na nchekwa data. Anyị na-emepụta paspọtụ maka mba niile n'ụwa ma e wezụga Bolivia. Mee ugbu a.
Kaadị ID maka ọrịre
Ị dị obere ma ọ dị gị mkpa ịga na klọb abalị ma ọ bụ cha cha? Anyị nwere ike ime nke ahụ ebe a site na ịnweta gị kaadị ID nke nwere ike ịsacha nke ukwuu. Ịchọghị ka a mara gị dị ka onye omekome na obodo nke gị, ị̀ chọrọ? Zụrụ kaadị ID US, EU na UK n'ịntanetị ebe a wee chekwaa ego. A na-emepụta ma debanye aha kaadị ID ahụ n'ime naanị ụbọchị atọ. A na-ebuga ya ozugbo n'ọnụ ụzọ gị site na DHL, UPS, EMS. Mee ugbu a
Ọnụ ego Asambodo NCLEX 2022
Ị chọrọ n'ezie ịbụ nọọsụ ma ọ bụ ndị ọrụ ahụike na US n'ihi ya, ụwa dum, ọ bụ eziokwu? Ị nwere ike ịchekwa oge ebe a site na itinye na ịtụ asambodo NCLEX sitere na MDL. Anyị na-enweta gị asambodo n'ime naanị ụbọchị ọrụ 2-3. Ọnụ ego a na-akwụ maka ịga nke ọ bụla n'ime ule NCLEX bụ $200 ma ọ bụrụ na ị na-achọ akwụkwọ ikike na US Dabere na ebe ị bi, ụlọ ọrụ nọọsụ steeti gị nwere ike ịchọ ụgwọ ndebanye aha ọzọ. Mana ebe a, anyị na-enweta ya ngwa ngwa karịa ka ọ dị na mbụ ma ị naghị anwale ule ọ bụla ya mere ọnụ ahịa dị elu. Mee ugbu a
Zụrụ ikike obibi n'ịntanetị
Ekwesịrị ịbụ nwa amaala ebe a na MDL. Ị chọrọ ịzụta akwụkwọ ikike obibi n'ịntanetị? Oge na ebe zuru oke. N'ebe a, anyị na-enweta gị akwụkwọ ikike obibi n'ime naanị ụbọchị ọrụ 3-4. Akwụkwọ ikike obibi a anyị na-emepụta bụ ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Anyị na-enyekwa ikike ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ ná mba ọzọ. Ị nweere onwe gị ibi na US, EU, UK, Australia na kọntinent ọ bụla ị họọrọ n'oge na-adịghị anya ka otu izu gachara ka ị kpọtụrụ anyị. Gịnị mere kpọtụrụ ugbu a ma nweta akwụkwọ ikike obibi
Nye iwu akwụkwọ niile n'ime ụbọchị 3
Na MDL, anyị na-emepụta ngwaahịa na ọrụ dị iche iche. Anyị kpọrọ aha ole na ole. Ụfọdụ ndi ozo anyị na-emepụta bụ;
Okwu ego, Asambodo Ahụike, SSN, IELTS & TOEFL, Aha ala, Diploma ụlọ akwụkwọ na asambodo wdg
Akwụkwọ ndị a niile ekwuru n'elu dị ebe a. Anyị na-ahụ na anyị ga-enweta gị ihe kacha mma mgbe ị na-enye asambodo n'aka anyị. Mee ugbu a
Ihe ụfọdụ ndị ahịa anyị na-ekwu gbasara ọrụ akwụkwọ anyị
Adara m ule ịnya ụgbọ ala ọtụtụ ugboro. Nke a bụ oge mbụ m tinye akwụkwọ maka ezigbo ikike ịnya ụgbọ ala German nwere MDL. Ọ dị nnọọ mfe ma ha na anyị rụkọrọ ọrụ iji dozie nsogbu ọ bụla ngwa ngwa, ọbụlagodi akwụkwọ na-efu ma ọ bụ na-ezighi ezi ma nata anyị paspọtụ na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala mgbe anyị kwere nkwa. Ụmụ okorobịa na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Obi ụtọ dị ukwuu !!! Jurgen Neuer D. Augsburg, Germany
Jurgen Neuer D.Onye ndu
Mbụ m chere na ọ bụ ojoro. Ihe niile mere ngwa ngwa. A ghọgburu m otu puku euro 5,000 n'ebe ọzọ. M wee kpebie ịnwale ikpeazụ na MDL. Eluigwe dị mma, ha wepụtara akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala Sweden n'ime naanị ụbọchị 3. M mechara gaa na ụlọ ọrụ Transportstyrelsen ka m lelee ma debanyere aha ya! Dị ka anwansi !!! Taa di m na nwa m nwoke mechara nweta paspọtụ Swedish & ikike ịnya ụgbọ ala Romania ebe a. Daalụ ụmụ okorobịa! Mmakọ!!!
Anisha ForsbergOnye edemede
Ndewo, Biko gbalịa ịdị ngwa ngwa oge ọzọ. Enyere m iwu ikike obibi nke Canada- Green card na asambodo ala n'aka unu. O doro anya na ị were ogologo oge karịa ka a tụrụ anya ya. Obi dị m ụtọ n'agbanyeghị na m nwetara akwụkwọ m. Nọgidenụ na-arụ ọrụ nke ọma!
Achọrọ m ịsị unu daalụ. Abụ m nwa amaala EU zuru oke ugbu a. Enwere m akwụkwọ ikike ngafe EU (Belgium), Asambodo ọmụmụ, Kaadị Id na Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala. Enwere m ike ịchọrọ akwụkwọ ndị ọzọ n'aka gị. Yabụ na m ga-akpọtụrụ gị ọzọ. Daalụ nke ukwuu. Rita G. Brussels, BG.
Rita G.Nwanyị azumahia
Achọla m ebe m ga-enweta ikikere pilot na ikike ụgbọ mmiri n'ịntanetị n'efu. Ekele dịrị MDL bụ naanị ndị na-enye ọrụ a. Ha dị egwu! Ana m eji ikikere pilot nkeonwe m nwetara ebe a n'efu. M ga-enye gị akara kpakpando 4.5! Enweghị ike inye gị 5 niile ...hahahaha!
Jim MorenoPilot nkeonwe
Nyochaa data & Nchekwa
A na-anwale nke ọma ma nyochaa akwụkwọ mbụ anyị. Agbanyeghị, onye ọ bụla nwere ike nyochaa akwụkwọ ahụ site na iji webụsaịtị gọọmentị wee tinye koodu Telepoint ma ọ bụ diski nkwenye nke enyere maka akwụkwọ ọ bụla. anyị na-eduzi gị otu esi eme ihe ndị a mgbe ị na-enye akwụkwọ n'aka anyị.
Nzuzo data nke onye ahịa: Gị data dị nnọọ mma na anyị. Anyị anaghị ekpughe ya ebe ọ bụla na-enweghị nkwenye gị. Yabụ dị ka onye ahịa anyị mgbe ị na-azụta akwụkwọ izizi ma ọ bụ adịgboroja n'aka anyị, ị nweghị nchebe!
Ngwa anyị Ọkachamara:
Anyị na ndị ọrụ gọọmentị na-enwe mmekọrịta siri ike na-enye anyị ihe kacha mma achọrọ maka imepụta akwụkwọ n'ezie. Anyị na-eji ihe dị elu dị ka akwụkwọ pụrụ iche, mbipụta intaglio, mbipụta micro, na akwa fluorescent nke a na-apụghị ịhụ anya na anya gba ọtọ na ụfọdụ igwe nyocha. Agbanyeghị, anyị anaghị akwado maka akwụkwọ adịgboroja wee dụọ ndị ahịa anyị ọdụ ka ha gaa naanị ezigbo akwụkwọ, paspọtụ, ID, wdg nke enwere ike ịnweta na obodo ndị ọzọ.
Akwụkwọ nwere ike ịlele:
A na-emepụta ezigbo akwụkwọ anyị site na iji ihe niile ọkaibe n'ihi ya; enweghị ohere maka ọdịda. Ezi akwụkwọ anyị nwere akara nchekwa niile dị mkpa nke na-enye ya ohere ịgafe ọkwa niile nke nyocha nyocha na nkwenye
Ndebanye aha data biometric:
Mgbe ị na-enye akwụkwọ ikike ngafe, visa ma ọ bụ akwụkwọ ndị ọzọ n'aka anyị, anyị na-arịọ gị ka ịnye ihe ndị a: Anyị na-eji njirimara gị pụrụ iche gụnyere akara mkpịsị aka, geometry aka, geometry earlobe, retina na iris ụkpụrụ, ebili mmiri olu, DNA na mbinye aka na otu ihe emelitere na nchekwa data gọọmentị. Yabụ, ọ bụrụ na achọrọ ya, enwere ike ịnweta ozi biometric gị site na ebe ọ bụla site na iji sistemụ nchekwa data gọọmentị. Ọ bụrụ na ị nwere ozi ọ bụla na-adaghị adaba ma ọ bụ ndekọ ọjọọ, ndị ọkachamara anyị nwere ike iji nke ọhụrụ dochie ha ma dozie ha n'anya gọọmentị.
Ịdọ aka ná ntị!!! Kpachara anya maka ndị wayo na ndị aghụghọ!
Enwere ọtụtụ ndị na-eweta akwụkwọ adịgboroja dị n'ịntanetị bụ ndị na-enye naanị ọnụ ala na akwụkwọ adịgboroja nke na-agbanwe dị ka nke dị adị. Kpachara anya mgbe ị na-azụta akwụkwọ n'ịntanetị n'ihi na mmejọ gị nwere ike ịkpata gị nnukwu nsogbu. Mana anyị na gị nọkwa n'udo. Anyị na-ahụ na akwụkwọ anyị niile bụ ezigbo 100% ma debanyere aha na nchekwa data gọọmentị na-ezute ụkpụrụ steeti niile. Ewezuga nke a, anyị na-ahụkwa na ozi gị dị n'ime anyị yana ọtụtụ nchekwa na nzuzo. Ị nwere ike ịlele ihe anyị afọ ndị ahịa kwuru gbasara Anyị. Ị nwere ike idozi oge n'efu na ndị ọkachamara ọkachamara anyị iji nyere gị aka dozie nsogbu gị. MDL bụ naanị ebe kacha mma maka gị!
Ụgha Nkwụghachi: N'ọnọdụ ọ bụla nke akwụkwọ anaghị enyefe ma ọ bụ ihe adịghị mma ndị ọzọ, 99.00% A na-enyeghachi gị ego gị site n'otu ụzọ ịkwụ ụgwọ!
Data onye ahịa
Nkwenye ego azụ 99%
Obi ụtọ ndị ahịa 97%
Nọmba mmepụta anyị
Akwụkwọ emepụtara kwa ọnwa
Ngụkọta akwụkwọ ewepụtara
Zụrụ ụgbọ mmiri ikike na Florida & London
Tinye akwụkwọ ikike maka Pilot License-MPL na Europe
Ezigbo nkeonwe Pilot License PPL maka ọrịre
Esi zụta Azụmahịa Pilot Azụmaahịa-CPL n'ịntanetị
Kpọtụrụ anyị ebe a iji nye akwụkwọ gị iwu
Ekwentị ex: +49 1521... *
Zụrụ ikike ịkwọ ụgbọala EU
Zụrụ ikike ịnya ụgbọ ala UK
Zụrụ ikike ịkwọ ụgbọala US
Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ndị ọzọ
Tugharia na asusu gi
Nwebiisinka @MyDriversLicence. Ikike niile echekwabara.
Zitere anyị ozi site na WhatsApp ebe a